Xiddiga Kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi oo xabsiga loo taxaabay kaddib markii… – Gool FM
Xiddiga Kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi oo xabsiga loo taxaabay kaddib markii…
Haaruun May 18, 2020
(London) 18 Maajo 2020. Xiddiga xulka qaranka England iyo Kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi ayay boolisku xireen Subaxnimadii Axadda kaddib markii uu jabiyey sharciga bandowga, waxaana gacanta lagu dhigay 4:00 subaxnimo xilliga UK.
Saraakiisha Booliska ee Magaalada caasimadda ah ayaa lagu soo wargeliyey dhib ka dhacay qeyb ka mid ah dabaqa uu deggan yahay xiddiga xulka qaranka England, kaddib markii loogu yeeray haweeney xanuunsan, gaariga Ambalaaska ah ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa oo xaaladda ka qeyb qaadanayey.
19-sano jirkaan ayayna saraakiishu qabteen, waxaana loo taxaabay xabsiga Booliska.
Afayeen u hadlay booliska ayaa yiri: ‘Booliska iyo Adeegga Ambalanska ee London waxaa loo wacay 03:53 maalintii Axadda ee 17-ka May si ay uga warbixiyaan haweeney aan caafimaad qabin’
Sarkaalkan ayaa xaqiijiyay in haweeneyda loo qaaday isbitaal, isla markaana nin lagu qabtay goobta uu wali ku jiro gacanta Booliska.
Booliisku waxay ku laabteen guriga Hudson-Odoi Axaddii si ay u sii wadaan baaritaankooda la xiriira arrinta, welina ma jiro wax war ah oo ka soo baxay kooxda uu ka xiddigan ka tirsan yahay ee Chelsea.
Kooxda Manchester United oo qarka u saaran inay dhammaystirto heshiiska ay kula soo wareegeyso Saul Niguez